ကျွန်းလှ စတင်ပေါ်ပေါက်လာခြင်း « kyunhla Township
Home » History » ကျွန်းလှ မြို့ဟောင်း » ကျွန်းလှ စတင်ပေါ်ပေါက်လာခြင်း
ညောင်ရမ်းခေတ် အနောက်ဘက်လွန် မင်းတရားကြီး လက်ထက် (၉၆၇-၉၉၀) အုံတုံအစုသား ကသည်းအမျိုးသား ငလှောက်သည် နောက်ပါ အိမ်ထောင်စုများနှင့်အတူ ချင်းတွင်းမြစ်နှင့် ဇီးပင်တောင်တန်းကို ကျော်ဖြတ်၍ ရေကြည်ရာမြက်နုရာ ဒေသကို ရှာဖွေရွေးချယ်ရင်း ပြောင်သွယ်ချောင်းရိုးအတိုင်း စုန်ဆင်းလာခဲ့သည်။ ငလှောက်တို့အဖွဲ့သည် အခြေတကျ အိုးအိမ်တည်ထောင်နေထိုင်ရန် နေခင်းထိုင်ခင်း သာယာကောင်းမွန်သော မူးမြစ်နှင့် ပြောင်သွယ်ချောင်းတို့ ပေါင်းဆုံရာမှ ၅၀၀ တွင်းခန့် ကွာဝေးသော ကတူးတို့နေထိုင်ရာ ၀င်ရဲရွာသို့ ဆိုက်ရောက်လာခဲ့ကြသည်။
ငလှောက်သည် ထိုဒေသ၀န်းကျင်ကို စိုးမိုး အုပ်ချုပ်နေသော ရှမ်းလူမျိုးများ၏ အကြီးအကဲဖြစ်သူ အင်တိုင်းသူကြီးထံ ခွင့်တောင်းခံ၍ မူးမြစ်နှင့် ပြောင်သွယ်ချောင်းတို့ ပေါင်းဆုံရာ သန်လျက်စွန်းသဏ္ဍန်ရှိ သာယာလှသော ကျွန်းစွယ်အငူ (အရှေ့ဘက်တွင်မူးမြစ်၊ တောင်ဘက်နှင့် အနောက်ဘက်တို့တွင် ပြောင်သွယ်ချောင်း၊ မြောက်ဘက်တွင် ဖက်ဆွတ်ချောင်း၊ ဤသို့လျှင် အရပ်လေးမျက်နှာမှ ရေပတ်လည်ဝိုင်းနေသည့် လှပသော ကျွန်းမြေသဏ္ဍန်ပေါ်၌ တည်နေခြင်းကြောင့် ကျွန်းလှဟု ခေါ်တွင်ပါသည်။ အချို့ကရွာတည်ရာအနီးတစ်ဝိုက်တွင် လှပသော ကျွန်းပင်များကို အစွဲပြု၍ “ကျွန်းပင်လှရွာ” နောင်တွင် “ကျွန်းလှရွာ” ဖြစ်လာသည်ဟု ဆိုပါသည်။) သက္ကရာဇ် ၉၉၀ ပြည့်၌ ကျွန်းလှခေါ် ရွာတစ်ရွာကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။
ဘုရားတည်ခြင်း၊ ကျောင်းဆောက်ခြင်းစသော သာသနိကအဆောက်အအုံတို့ကို ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းကြသော ရှမ်းနှင့် ကတူးတို့ကလည်း အုံတုံအစုသား ငလှောက်အဖွဲ့အား နေရာထိုင်ခင်းများကို တွန့်တိုခြင်းမရှိ ခွဲဝေချထားခဲ့ပါသည်။ ကျွန်းလှရွာတည်ထောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ “နော်ရထာသီရိကျော်စွာ” ဘွဲ့ခံ အင်တိုင်းငါးရွာ ရွှေမှူးကြီး ငဘိုးချုပ်၏ ပုရပိုက်တစ်ဆူတွင် . . .
“ကျွန်းလှရွာကို အုံတုံအစုသား ဘိုးလှောံ၊ သား ဘိုးသက်စံတို့ အနောက်ဘက်ကျေးရွာက ကူးပြောင်းလာရောသည့်ကာလ၀င်ရဲသားတို့ ရှိနေနှင့်သည်ဖြစ်၍ မင်းတို့နှင့်အတူ နေလိုကြောင်းပြောဆိုရာ ၀င်းရဲသားတို့က ငါတို့လည်းအင်တိုင်းသူကြီးတို့ချထားသောကြောင့် နေရသည်ဖြစ်၍ အင်တိုင်းသူကြီးတို့ထံလာရောက်တောင်းဆိုသောကြောင့် ပြောင်သွယ်ချောင်းမြော ညောင်ပင်ကုန်းတန်းကလျှင် အရှေ့ကို မူးဆိုက်ဝေခြမ်း၍ နေကြတော့ ချထားသည့်အတိုင်း ငညီးဆောင်ဆိုသူကို လိုက်၍ပြသ ချထားစေကြောင်း”
ဟု မှတ်တမ်းတင်ထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
သက္ကရာဇ် ၁၁၄၅ ခု၊ ကျွန်းလှရွာ စစ်တမ်းတွင်လည်း . . .
“သက္ကရာဇ် ၁၁၄၅ ခု၊ တော်သလင်းလ္ဆန်း၊ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ကျီဝန် ၀န်စု ကျွန်းလှရွာ ရွှေမှူးငအောင်ဖြိုး၊ နံ၎ဟူး၊ အသက် ၄၁ ရှိသူကို စစ်မေးသော် ထွက်ဆိုသည်။ ကျီဝန် ၀န်စု ကျွန်းလှရွာကို ကျွန်တော် ဘေး ငလှော မှူးကြီးစီရင်သည်။ မရှိလျှင် ကျွန်တော် ငအောင်ဖြိုး မှူးကြီးစီရင်သည်”
အစရှိသဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျွန်းလှရွာကို ကသည်း ငလှောက် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်မှာ ထင်ရှားလှပါသည်။
ငလှောက်တို့ မိသားစုသည် ကျွန်းလှရွာကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနောက် အချိန်မကြာမြင့်မီ အုံတုံအစုသားအဖြစ်မှ ရွှေအစုသား(ရွှေလုပ်သား) အဖြစ်သို့ အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။
လှေကြီးပေါ်တွင် လှေငယ်တင်သကဲ့သို့ အင်တိုင်းငါးရွာရွှေအစုဝင် နယ်မြေပေါ်တွင် တည်ထောင်ထားသော ကျွန်းလှရွာသည် ရွှေအစုဝင် နယ်မြေအဖြစ်သို့ အလွယ်တကူ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ သီရိသုဓ္ဓရာဇာ မဟာဓိပတိဘွဲ့ခံ သာလွန်မင်းတရားကြီး လက်ထက်(၉၉၁-၁၀၁၀) တွင် ကျွန်းလှနယ်မြေကို ရွှေခွန်တော်ဆက် နယ်မြေအဖြစ် ထပ်မံ၍ အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရကြောင်းကိုလည်း ၄၅ ခု စစ်တမ်းတွင် . . .
“ကျွန်တော်တို့ ကြီးမှူးစီရင်သည့် ရွှေခွန်တော်ဆက် ကျွန်းလှရွာနေ လူစုတို့ကို သာလွန်မင်းတရားကြီး လက်ထက်တွင် ပေးသနားတော်မူသည်”
ဟု ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ရွှေခွန်တော်ဆက် နယ်မြေဖြစ်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် . . .
“နယ်မြေရှစ်ရပ်အတွင်း ကျောင်း၊ ဘုရား၊ ဝတ္ထုကမြေမရှိ။ ကျွန်းလှရွာ အစုသားတို့ နေထိုင်လုပ်စား၍ ရွှေခွန်တော်ကို ဆက်သွင်းထမ်းရွက်ရပါသည်။ ချောထမင်းလုံးအကောက်အစား တရားကွမ်းဘိုးကင်းကူးတို့ အခွန်အတုတ်မရှိ။ ( မှတ်ချက်။ ။ မူလကျွန်းလှရွှေမြေသည် အင်တိုင်းရွှေမြေပင်ဖြစ်ခဲ့သဖြင့် ကျွန်းလှရွှေအစုဝင် နယ်မြေကိုလည်း အင်တိုင်းရွှေအစုဝင်နယ်မြေကဲ့သို့ ညောင်ရမ်းမင်းတရားကြီးလက်ထက် (၉၅၉-၉၆၇)တွင် ဖွဲ့စည်းသည်ဟု နော်ရထာသီရိကျော်စွာဘွဲ့ခံ ဦးဘိုးချုပ်စသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့က မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ဟန်ရှိပါသည်။) တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် ရွှေခွန်တော်ကို ရွှေဘဝါးတော်အောက် ကျီဝန် ကျီစာရေးတို့က ဆုံနှိုးဆော်ဆက်သွင်းသည်” ခံစားပိုင်ခွင့်များကို ဖော်ပြထားကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
ကျွန်းလှရွာသည် ရွှေမြေပေါ်တွင် တည်ထောင်ထားသော ကျေးရွာဖြစ်၍ အနောက်ဘက်လွန်မင်းတရားကြီး လက်ထက် (ကျေးရွာတည်ထောင်စဉ်) ကပင် ရွှေအစုဝင်ကျေးရွာအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရသော်လည်း သာလွန်မင်းတရားလက်ထက်သို့ ရောက်မှသာလျှင် ထင်ရှားသော ရွှေအစုဝင်ရွာဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။စာပေဗိဗ္မာန်စာမူဆုရ ဆရာကြီး မောင်ကျော်ရှင်း ၏ ရွှေ အလယ်ကြောင်း စာအုပ်မှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။